Diyopost.com :: सातखाल्डे शहीद पार्क निर्माण अलपत्र सातखाल्डे शहीद पार्क निर्माण अलपत्र - Diyopost.com
सातखाल्डे शहीद पार्क निर्माण अलपत्र
पशुपतिनगर– एकै ठाउँमा सात प्रजातान्त्रिक योद्धा मारिएको इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–१ स्थित सातखाल्डेमा निर्माण थालिएको शहीद पार्क अलपत्र परेको छ । दुई दशकअघि नै शिलान्यास गरिएको पार्क अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रका निम्ति शुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्षको क्रममा २०१८ सालमा तत्कालीन सुरक्षाफौजबाट मारिएका सात जना शहीदको स्मृतिमा पार्क निर्माण थाले पनि अधुरै रहेको स्थानीय जीवन सिवाले बताए ।
सन्दकपुर गाउँपालिका–१ का डाकमान राई, वीरबहादुर राई, गजबहादुर राई, कर्णबहादुर राई, उदयबहादुर साउदेनलगायतलाई खाल्डो खन्न लगाई त्यहीँ पुरेर हत्या गरिएको थियो । सरकारी तथा निजी गरी तीन रोपनी जग्गामा निर्माण थालिएको पार्क वरिपरि फूलबारी, बगैँचा, चौतारी र बीचमा शहीद स्तम्भ राख्ने योजना थियो ।
फेसबुकमा यस्तो अपत्तिजनक शब्द बोलेपछि पूर्व डिएसपी विरुद्ध बुहारीको उजुरी !
काठमाडौं, असोज ७ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत जेठाजुले बुहारीलाई आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको उजुरीमा प्रहरीले बेवास्ता गरेको छ । ...
नेपाली दुताबासबाटै मानव तस्करी : यस्तो छ ठग्ने प्रपञ्च !
यूएई, असोज ७ । ठूलो खर्च गराएर नक्कली कागजातका आधारमा यूएई ल्याउने धन्दामा नेपाली दूतावाससमेत सामेल भएको पाइएको छ। अन्नपूर्ण ...
बदनामी पप्पुलाई फेरि २ अर्बको नयाँ ठेक्का !
काठमाडौं, असोज ७ । दर्जनौँ पुल र सडक अलपत्र पार्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले फेरि २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको ठेक्का पाएको ...
ओली सरकारको ‘अर्को उपहार’ : दशैंको मुखमा १० प्रतिशत सार्वजनिक गाडी भाडा बृद्धि !
काठमाडौं, ६ असोज। सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बृद्धि गरेको छ । दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ नै नखोलेपछि सरकार १० प्रतिशत ...
मिर्गौलापीडित बालिकालाई आर्थिक सहयोग
खोटाङ, ६ असोज ,खोटाङ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङकी मिर्गौलापीडित ९ वर्षीया सुस्मिता विश्वकर्मालाई रु २२ हजार ५०० आर्थिक सहयोग ...
किसानको आकर्षण खुमल–४ धानप्रति, यसमा छन् यस्ता विशेषता
ललितपुर, ६ असोज । नेपालमा सबैभन्दा बढी किसानले लगाउने खुमल–४ जातका धानको बीउमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिए पनि किसानको आकर्षण ...
श्रीमानकाे कुटाइबाट श्रीमतीको मृत्यु
बागलुङ, असोज ६ । सामान्य विवादकाक्रममा श्रीमान्ले लठ्ठी प्रहार गर्दा बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–२ मा ७० वर्षीया श्रीमतीकोे मृत्यु भएको छ ...
दसैं टीकाको उत्तमसाइत कात्तिक २ गते बिहान ९ बजेर ५१ मिनेटमा
काठमाडौं, असोज ६ । नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले यस वर्षको दसैंका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्ष असोज ...
१०० वर्षमा राष्ट्रकविः ‘यो जीवनीको रस प्यून जानौं !’
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं, असोज ६ । ‘बुढेससम्मन् पनि ज्यून जानौं यो जीवनीको रस प्यून जानौं’ वरिपरि पहाडले घेरिएको लमजुङको पुस्तुन ...
Phone -: 01- 5705310